Avy any Frantsa ka hatrany Suisse, 7 velaran-tany iainan'ny bibidia, farihy milamina, ary ny lapa mimanda dia miandry ny ho tonga ao amin'ny rakitsary misy ny fialantsasatra tsy hay hadinoina indrindra tany Eropa. Noho izany, alao ny fonosana maivana ary ho vonona hiara-mitondra afa-tsy ireo fahatsiarovana sy tantara miaraka aminao, rehefa manomboka amin'ny zava-baovao, ary mandehana amin'ny lalana tsy dia lavitra.
Azonao atao ny mametraka ny tranonao any an-drenivohitra mavokely sy manintona, Toulouse, na ilay tanàna manintona ao Albi. Samy mahafinaritra ny amin'ny lalan-kivoahana vaky ny tanàna any Frantsa ary fitsangatsanganana lava kokoa Fialantsasatra frantsay. Afaka tonga soa aman-tsara any Toulouse ianao amin'ny fitsangatsanganana lamasinina avy any Paris sy Barcelona teo ho eo 5 ora.
Hamaranana, ity tanàna misy lalana voadaroka ity vatosoa miafina any Eropa's firenena be fitiavana ary mendrika fitsidihana tanteraka!
Ny tahiry lehibe iray hafa any an-tokotany manaitra dia ny Kladska Tahiry voajanahary. Misy làlana mahafinaritra mankany amin'ny farihy, ary tena manaitra ny fahalavoana amin'ny fararano. fa, raha tianao kokoa ny tanàna kely sy chateaux, dia ho tianao ny neo-Gothic Hluboka Chateau.
Mizara roa ny tanàna 3 faritra: tanana haolo, atsimo, sy ny seranan-tsambo, izay trano amin'ireo kolontsaina sy olona samihafa manerana an'izao tontolo izao. Ary noho izany, culinary lanitra io, manompo izay rehetra irin'ny fonao. Museums, Tsena lehibe, katedraly, mpamorona lamaody famoronana endrika ambony indrindra, adiny iray monja miala ny renivohitra, lamasinina.
Love be Lucerne tena tsara ho an'ny andro fitsangatsanganana amin'ny Alps, ary mbola hitan'ny mpandehandeha. Noho izany, hahazo tombony tsy misy vidiny ianao hahafinaritra azy sy handinika an'i Switzerland amin'ny lalan'ny voadaroka. Mandehana amin'ny lalana Dragon ary mizaha toetra ny herinao eo amin'ny zaridain-tady, izay hetsika ivelany tsara indrindra manodidina an'i Lucerne.
Te-hametaka ny pejinay bilaogy “7 Akan'ny Toeram-pivarotana any Europe” ianao ao amin'ny tranonkalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Foff-beaten-path-destinations-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)